कोभिड १९: चीनबाट के सिक्ने ? प्रा. डा. राजीव झाको अनुभव – Nepalilink
कोभिड १९: चीनबाट के सिक्ने ? प्रा. डा. राजीव झाको अनुभव
चीनको सियान विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शास्त्र विषयको प्राध्यापन गर्दै आउनु भएका प्रा. डा. राजीव झा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रतिनिधि रमेश लम्साललाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा । तस्विर- प्रदीपराज वन्त, रासस
शुक्रबार अपराह्न भैँसेपाटीस्थित निवास पुग्दा उहाँले चिनियाँ सरकारका प्रतिनिधि, प्राध्यापक र चिकित्सकहरुबाट बधाई ग्रहण गरिरनुभएको थियो । उहाँको वीच्याट अकाउन्टमा निरन्तर फोनको घन्टी बजिरहेपछि हामीले केहीबेर कुर्यौँ । उहाँले कोरोनाकै विषयमा अनुसन्धान गर्न चीनको केन्द्र र प्रान्तीय सरकारबाट ८ लाख आरएमबी (चिनियाँ पैसा) अनुदान पाउनुभएको रहेछ । एक करोड ३२ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ हुने सो रकम प्राप्त गरेको खबर भर्खरै चिनियाँ साथीहरुबाट पाएका प्रा. डा. राजीव झा पनि खुसी देखिनुहुन्थ्यो ।
“सरी है, चीनबाट साथीहरुको निरन्तर फोन आएकाले तपाईंहरुलाई कुराएँ” प्रा.डा. झा कुराकानीलाई अब तयार हुनुभयो । हामीलाई पनि जिज्ञासा भयो कोरोना विषयमा नै जान्ने । किनभने यतिखेर संसारका मानिसले सबैभन्दा धेरै खोजी गरेको र सुन्न चाहेको विषय कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने नै होला सायद । हामीले पनि यहीँबाट वार्ता शुरु गरयौँ– तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको अनुदान कस्तो हो ? यसबाट के गर्ने हो ?
तीन महिना पहिलेको ‘कोभिड–१९’ को मुहान मानिने उहान यतिखेर भने सामान्य जीवनमा फर्किसकेको छ । मेट्रो रेल तथा बस चल्न शुरु गरेका छन् । मानिसहरु सामान्य अवस्थामा फर्केका छन् । कलकारखाना, होटल, रेष्टुरेन्ट नियमित जस्तै भइसकेका छन् । चिनियाँले यति चाँडै उहानलाई यस्तो सामान्य अवस्थामा ल्याइसकेको छ । अझ आफ्ना केन्द्र तथा प्रान्तीय सरकारका अनुसन्धान कोषहरुलाई यति चाँडै ‘कोरोना अनुसन्धान कोष’ मा परिणत गरेर अनुसन्धानदाता र वैज्ञानिकलाई अनुदान दिन थालिसकेकोले आगामी दिनमा चिनियाँहरु कोरोनाको विषयको अनुसन्धानलाई कसरी अघि बढाउलान् भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । यसबाट हामीले पनि केही सिक्न सकिएला भनेर उहाँले प्राप्त गरेको यो व्यक्तिगत अनुसन्धानवृत्तिको विषयमा बताइदिन अनुरोध गरयौँ र यहाँ प्रस्तुत गरेका हौँ ।
चीनको उहानमा लकडाउन गर्दा पश्चिमाहरुले मानवअधिकारको विषय उठाएको भन्दै डा.झा भन्नुहुन्छ “वास्तवमा त्यो त मानअवधिकार भन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा गर्नका लागि लिइएको कदम थियो नि होइन ? हेर्नुहोस् हाम्रो नेपालीमा पनि बडो वैज्ञानिक र पुरानो भनाइ छ नि महामारीमा ज्यान जोगाउनु भन्ने । आखिर महिनादिन भन्दा बढी नै लकडाउन भयो त्यसैले त थोरै क्षतिमै रोगमाथि विजय नै प्राप्त भयो नि होइन ? नत्र भन्नुस त के हालत हुन्थ्यो होला आज चीनको ? अमेरिकाले पनि यही गर्नुपर्दथ्यो । खुल्ला समाजको परिचायक बन्न खोजेर मात्र हुँदैन, जुन देशको पनि पहिलो काम त आफ्ना नागरिकको ज्यान बचाउने नै हो भन्छु मत ।
“हाल नेपालमा लकडाउन भन्दा प्रभावकारी उपाय अर्को केही छैन भन्नुहुन्छ उहाँ । सरकारले भनेको मानौँ, लकडाउनका घरमै बसौं, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, भीडभाडबाट जोगिऔं यो भन्दा राम्रो उपाय अरु केही छैन ।” झाको सुझाव छ । कम्तीमा पनि २८ दिन लकडाउन गर्न उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । नेपालमा हालसम्म छ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । यो ठूलो सङ्ख्या नभएपनि खतराको घण्टी बजेको अवस्था हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । चीन वा भारतले अवलम्बन गरेको मोडललाई अवलम्बन गरेर नागरिक आफै सचेत भए आफ्नो समाज र देशलाई जोगाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
“हाम्रो बसोबास पनि एकाध शहरमा बाहेक अन्यत्र फरक फरक नै छ । सामाजिक बनोटले नै समाजिक दूरी कायम गरेको छ । एउटालाई सरयो भने धेरैलाई सर्दैन” डा झाको अनुभवमा ८० प्रतिशत कोरोना सङ्क्रमित सिटामोल नै खाएर पनि निको भएका छन् ।
नेपाल र चीनको बीचको मैत्री सम्बन्ध पनि पछिल्ला दिनमा झनै फैलिएको छ । राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार भएको छ । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङलाई लेखिएको पत्र त्यसैको उदाहरण भएको झाको भनाइ छ । सरकारी तथा गैरसकारी तहमा पनि राम्रो भातृत्व रहेको उल्लेख गर्दै झाले भन्नुभयो “हामीले आग्रह मात्रै गरयौं भने चीनबाट ठूलो सहयोग प्राप्त भइहाल्छ ।”
“कोरोनाको सक्रमण फैलन नपाओस् भनेर माइतीघर मण्डलामा चीनको समर्थनमा बालिएको मैनबत्ती र केही थान मास्क हामीले दिँदा उनीहरुको प्रतिक्रिया हेर्नुस्” प्रा. डा झा भन्नुहुन्छ “सङ्कटमा छिमेकी काम लाग्छ, सद्भावले मात्रै पनि ठूलो अर्थ राख्छ ।”
चीनले इटाली, स्पेन, सर्विया र अब अमेरिकालाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने सहयोगले संसारभर नै चिनियाँहरुप्रति सकारात्मक धारणा थप विस्तारित हुने झाको बुझाई छ । “सङ्कटमा कसले कस्तो सहयोग गरयो भन्ने विषय नै महत्वपूर्ण हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।